Air Canada Diyaarad skids off runway
Air Canada Diyaarad skids off runway sano 3 4 bilood ka hor #275
skids Diyaarad off runway, dadka kaligood ah baadhaya xaaladaha cimilada
Saturday, February 25, 2017, 6: 39 PM -
Guddiga Ammaanka Gaadiidka ayaa baaraya sababta ka dambeysa sababta diyaarad Air Canada ah uu yimid Maddaarka Caalamiga ah ee Pearson ee Toronto kubad off runway hore saaka.
Air Canada Diyaarad skids off runway sano 3 4 bilood ka hor #276
Ku mahadsan tahay in aad heshay: 51
Mid ka mid ah wax aan sameeyo ma run ahaantii halkan fahmi ... ahayd diyaarad meel caws ag RW ah, ama ...?
Skids offwayway… wax badan ma oran, waxay noqon kartaa hal giraan oo rw, ama diyaaradda oo dhan. Laakiin, waxay i xusuusineysaa shilkii TAM A320 ee ka dhacay Sao Paolo. Taasi waxay sidoo kale ka sii yaraaneysay dariiqa.
Air Canada Diyaarad skids off runway sano 3 4 bilood ka hor #280
Aan wax badan sida lagu sheegay in arrintan ku saabsan ,,, halkan waa sheeko dhinaca rakaabka
Waxaan ku dhuftay aad, aad u adag ': Air Canada duulimaadka durko off runway ee Toronto
Air Canada Diyaarad skids off runway sano 3 4 bilood ka hor #289
Waxaa halkan sheeko wanaagsan ...
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.197